Ukutshixwa kweAustralia kukuvuthelwa kokubuyiswa kokuHamba kwasekhaya
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Australia eziQhekezayo » Ukutshixwa kweAustralia kukuvuthelwa kokubuyiswa kokuHamba kwasekhaya
Airlines • isikhululo • Iindaba zase-Australia eziQhekezayo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukuqasha imoto • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
Ukubuyiselwa ngokukhawuleza kwasekhaya e-Australia kunokuba sengozini kunye nokuchaphazeleka kwamatyala, kunye nokuvalwa kwemida kuyandiswa, ngaphandle kokomeleza ibango lasekhaya kwi-H1 2021.
Ukutshixeka kunye nokuvalwa kwemida kurhulumente kusetelwe ukwenza buthathaka kwaye kucothise ukubuyela ekuhambeni kwasekhaya.
Inqwelomoya yenqwelomoya eQantas emi phantsi kubasebenzi bayo ibonisa indlela ende yokubuyela kwimeko yesiqhelo.
Ukonyuka kosuleleko kukhokelela kwishishini kumashishini ezokhenketho.
kunye Ostreliya Ukulwa nokunyuka kwamatyala e-COVID-19, uhambo lwasekhaya luye lwehla kakhulu. Ngelixa ukubuyiswa kwasekhaya e-Australia kwakomelele kwi-H1 2021, ukuphinda kwenziwe kwakhona kokutshixwa kwamaphepha kunye nokuvalwa kwemida yelizwe kuya kusebenza njengesibetho, kwaye kusete ukubuthathaka kunye nokucothisa ukubuyela kukhenketho lwasekhaya. Ukongeza, Qantas I-airline emi phantsi kwabasebenzi bayo ibonisa ithemba lendlela ende yokubuyela kwimeko yesiqhelo.
Ukubuyela ekhaya ngokukhawuleza e-Australia kunokuba semngciphekweni wokuthotywa kwamatyala, kunye nokuvalwa kwemida kuyandiswa, ngaphandle kokomeleza imfuno yasekhaya kwi-H1 2021. Uqikelelo lwamva nje lomzi-mveliso lucinga ukuba uhambo lwasekhaya lubuyela kwi-93.8 yezigidi kuhambo ngo-2021, lubuyela kuma-80.4% yeehambo zangaphambi kwe-COVID (2019), kodwa umahluko we-delta unokuthintela oku kulindeleka komeleleyo kulindelweyo. I-Australia ibiyinkokheli ekugcineni i-COVID-19 iphantsi kolawulo olunezinga eliphantsi kakhulu losulelo kunye nezithintelo ezingqongqo zokuhamba kumazwe aphesheya, zigcinwe iimeko.
Ukonyuka kosuleleko kukhokelela kwisibetho kumashishini ezokhenketho, ngoku axhomekeke kubahambi basekhaya kude kube phakathi ku-2022, xa kuvulwa imida yamanye amazwe. Ukuba ukutshixa okungapheliyo kuqhubeka kunye nokuzithemba kwabahambi kuyehla, imfuno inokunciphisa, kwaye ukubuyiswa kwasekhaya e-Australia kunokuqhubeka.
Izithintelo zakutshanje zilambise urhwebo lwezokhenketho e-Australia, kwaye inqwelo moya enkulu yelizwe- iQantas -iqala ukuva ukulunywa ngokuma phantsi kwabasebenzi abangama-2,500 XNUMX.
Ukubuyiselwa kweQantas kugxile kwiindlela zasekhaya ezinemida yamazwe aphesheya ubukhulu becala evaliweyo. Umntu ophetheyo wayeqala ukuvuselelwa okunentsingiselo, nangona ukonyuka kwamatyala kuye kwaba yingxaki. Ukwehla ngesiquphe kohambo lwasekhaya kunye nolwandiso olulindelekileyo lokutshixeka kwehlise umbono wethemba lomntu ophetheyo. Izenzo ezikhawulezileyo zeQantas ziya kunciphisa umthwalo wezezimali ekuphulukaneni nokugcwala kwabantu kwaye kufanele ukuba zikuncede ekukhuseleni ukusebenza kwexesha elizayo kwenqwelomoya. Nangona kunjalo, ukubuyela kwimeko yesiqhelo kungancitshiswa nje ukuba izithintelo ziphakanyisiwe njengoko kuthatha ixesha ukubuyisa abasebenzi kwaye kunokucothisa iinzame zokwandisa.
I-Australia iye yacotha ukugonya abemi bayo ngenxa yamatyala asezantsi. Nangona kunjalo, oku kubeka umceli mngeni kwaye kunokulibazisa ukubuyela kwimfuno yabakhweli ukuba ukuzithemba kwabahambi kuyaqala ukubetha.
Isitofu sokugonya sibonelele ngokuzithemba kwamanye amazwe kwaye siqala ukuxhasa ukubuyela kokuhamba. Ngenkqubela phambili yokugonya, i-Australia isemva kwamanye amazwe. Ngamaqondo okugonya aphantsi, abahambi banokuba madolw 'anzima ukuhamba ngaphandle kokugonya njengoko umngcipheko ngoku unyukile. Ke ngoko, ukuchacha kunokulibaziseka de inkqubo yokugonya iqokelele isantya kwaye abahambi base-Australia bazithembe kwakhona.